Amasayithi we-Japanese Online Casino | Amakhodi E-inthanethi e-Casino
(535 amavoti, isilinganiso: 5.00 out of 5)
Iyalayisha ... Imithetho yokugembula eJapan iqine kakhulu, futhi manje zimbalwa izindlela zokugembula ezisemthethweni. Kusukela ngo-1907, okuwukuphela kwezinhlobo ezifanele zokugembula ukubheja umjaho wamahhashi, umjaho wamabhayisikili, owezimoto nowezithuthuthu. Kweminye imidlalo efana ne-mahjong, i-pachinko, ne-bingo nazo zivunyelwe ukudlala ngemali, ngoba le midlalo iyajabulisa. Konke okunye ukugembula, kufaka phakathi i-poker namakhasino akukho emthethweni eJapane. Abadlali bavame ukuya eMacau ukuyodlala ekhasino lapho.
ILotto eJapan ibikhona kusukela ngo-1630. Kodwa ngisho nebhingo yavinjelwa isikhathi esithile, kusukela ngo-1842. Kwathi-ke, ekupheleni kweMpi Yezwe Yesibili, ngo-1945, iNational Lottery ibuyiselwe. Kukholakala ukuthi imali engena kuLotto izosiza ekwakheni kabusha izwe. Lapho idolobha laseJapan selibuyiselwe esimweni, uhulumeni wanquma ukungayeki iLotto.
Uhlu lwezindawo ze-Casino eziphezulu ze-10 zase-Japanese Online ze-Casino
Ngokusho kokuthola izindaba zakamuva zokugembula online eJapan, lo mthethosivivinywa owethulwa ngo-Ephreli 2013 ngenhloso yokwenza amakhasino abe semthethweni, unokwesekwa okubanzi kwezepolitiki. Ukwenza ukubheja ibhola ngokusemthethweni kufakwe ku-ajenda kahulumeni waseJapan. Futhi, ekugcineni, ePhalamende laseJapan lase2016 lavuma ukugunyazwa kwamakhasino, futhi bonke abakwazi ukulinda ukuqala ukusebenza nelinye lamazwe okugembula kakhulu emhlabeni.
Ukugembula ku-Japan eJapane
Ngokuya ngemithetho yokugembula online eJapan, umbono ovumelekile womdlalo yi-bingo, njengoba kubhejwa okuvunyelwe emidlalweni yebhola nokubheja emidlalweni e-4 ehlukile. Uhulumeni waseJapan akayiniki ilayisense yokusetshenziswa kwezingosi zokugembula eziku-inthanethi ezweni. Uhulumeni futhi wayefuna ukuvimbela abadlali baseJapan ukuthi basebenzise izingosi zangaphandle zokugembula online. Kepha, njengakwezinye izindawo eziningi emhlabeni, abadlali basazodlala ku-inthanethi.
Iqiniso lokuthi kunezindawo zokugembula online zabadlali baseJapan, ezibekwe kwamanye amazwe, uhulumeni wenza kube nzima ukulawula izakhamizi zabo. Lokhu kungenxa yokuthi uhulumeni akanawo amandla ezindaweni ezisendaweni. Abadlali baseJapan bakhululekile ukusebenzisa lezi zingosi. Kepha kungcono ukungadlali ezindaweni zomphakathi ezinjengezingosi ze-Intanethi. Esikhundleni salokho, abadlali kumele basebenzise amakhompyutha abo ukufinyelela amasayithi wokugembula aku-inthanethi.
Amasayithi e-casino e-inthanethi avuma abadlali baseJapane
Bona uhlu lwamasayithi ekhasino aku-inthanethi amukela abadlali baseJapan, futhi anikele ngemidlalo esezingeni eliphakeme nephephile. Lapha uzothola izinhlobo ezahlukahlukene zokuzijabulisa kusuka kumishini yama-slot kuya kumageyimu wekhasino bukhoma kusuka kubathengisi besoftware abadumile njengeNetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, Rival Gaming, nabanye abaningi. Ungafunda futhi nokubuyekezwa kwethu kwamasayithi ekhasino aku-inthanethi, ukuze wazi ukukhushulwa okungcono kakhulu okuku-inthanethi, amabhonasi nezinketho zokukhokha ezitholakala kubadlali abavela eJapan.
Kuyaziwa ukuthi ukugembula kuvinjelwe eJapane ezingeni likahulumeni. Kunombhalo ofanele kuCriminal Code. Kepha ngasikhathi sinye eJapan, ungadlala izinhlobo eziningi zamanani (ikakhulukazi ekubhejeni kwezemidlalo) futhi uhlanganyele ku-lottery. Ukugembula okunjalo eJapan kubhekwa njengesikhulu esisemthethweni, ngoba ukuletha imali ngqo esikhwameni sikahulumeni futhi kugadwe ngokuqinile yizinhlangano zikahulumeni ezahlukahlukene, kuwela ngaphansi kwegunya lemithetho ekhethekile.
Ukugembula okusemthethweni ngesiJapane - nguKoei kyogi (ukushushuluza esidlangalaleni)
Kunezinhlobo eziningana eziyisisekelo Koei kyogi . Phakathi kwabo: kuzuba - keiba izikebhe ezigijimayo - kotei , umjaho wamabhayisikili - keirin , ukugijima izithuthuthu nokunye okunjalo. Ukubhejela ezemidlalo ngokugembula - lokho amaJapane angazijabulisa ngakho ngaphandle kokwephula imithetho yezwe lawo. Konke ukubheja kontrolirliruyutsya isiphathimandla sendawo sombuso. Kuyathakazelisa ukuthi i-80% yenzuzo isiyonke evela ekuthengisweni kwamathikithi emicimbi yezemidlalo namanani - lokhu kumane kuyinzuzo yokubheja.
Lottery inhlanhla eJapane
Amathikithi e-Lottery fortune - takarakudzi (takarakuji) kuvame ukuthengiswa ezitolo ezincane zamadolobha amakhulu, lapho kuqhutshelwa khona ilotho. Amalotho aphathwa ngezinsuku ezithile. Amathikithi elotho kaKhisimusi athengiswa eMizuho Bank kuphela. Bese besabalalisa abathengisi. UJumbo Nenmatsu Takarakuji (takarakudzi) akuyona kuphela uhlobo lwelotho. Kepha lapha umklomelo omkhulu kungaba ama-yen ayizigidi eziyishumi noma ngaphezulu. Kodwa-ke, ngokomthetho, ama-50% wenzuzo evela kulawo malotho azothunyelwa kunhlangano esiza abantulayo kanye nakumgcinimafa kahulumeni. I-lottery yaseJapane kungaba ngezinhlobo eziningana. Ngokuyinhloko le layisense, idijithali, ukuhluka kwezinombolo nemidlalo yendabuko enamakhadi. Intengo yethikithi ngalinye ikububanzi obusuka kuma-yen ayi-100 kuye kwangama-500.
Pachinko shayela umdlalo emshinini wokugembula, okubizwa ngokuthi yi-slot, okubukeka njenge-pinball eqondile. Njengokuhlukile ngokusemthethweni pachinko akufakiwe ekugembuleni. Mhlawumbe amaJapan akwenzile ngenxa yezizathu ezingokwesiko noma zomlando. AmaHholo ane-pachinko slot machine eziqhutshwa izinhlangano ezizimele, zisakazeke kulo lonke elaseJapane, futhi izivakashi ezivakashela nsuku zonke ziba ngaphezu kwengxenye yabantu kanye nezivakashi.
Emdlalweni we pachinko kuyadingeka ukunqoba amabhola amancane ensimbi. Ububanzi bobuhlalu ngamunye bungamamilimitha ayi-11 ngqo. Intengo yelinye lamabhola eJapane cishe ama-yen amane, kepha abadlali akuzona izinto ezincane, imvamisa zithathwa kanye ngama-yen ayinkulungwane. Umdlalo uqukethe iqiniso lokuthi ngokusebenzisa isethi yazo zonke izithiyo ezithinta ukuhanjiswa kwamabhola, ukuthumela amabhola emgomweni ngosizo lwedivayisi ekhethekile ethinta ijubane labo. Igoli - iphakethe lokuwina emshinini webhodi pachinko. Amabhola amaningi ngokudlula ngokuphepha kuzo zonke izithiyo azowela ngaphakathi nangaphakathi komshini, umdlali ngeke alethe ibhonasi. Kepha amanye amabhola asazowela emaphaketheni, enza umshini usebenze bese unikeza umklomelo. Ukunqoba - amabhola afanayo athelwa ngokuzenzekelayo ethangini elikhethekile. Kamuva, la mabhola angashintshaniswa ebhokisini ehhovisi ukuze athole imiklomelo nemiklomelo kamuva endaweni eseduze nehholo lokudlala ngasese ishintshaniswa ngemali. Lolu hlelo oluyinkimbinkimbi ukuthi okunye, njengokukhohlisa okunonya, ukukhohlisa umthetho waseJapan, owenqabela lo mdlalo ngokuwina. Kepha lolu hlelo selusebenze ngempumelelo ezweni lonke isikhathi eside.
Pachisuro - inguqulo yesimanjemanje nekhompyutha yomshini wakudala pachinko. Ziyafana kakhulu nemishini ye-slot kwamanye amazwe futhi zisatshalaliswa eJapan kanye nase pachinko . AmaJapan akholelwa ukuthi ukuyidlala ku i-pachisuro elula ukunqoba. Imishini yeslot pachisuro idume ngokuthi ihlala ikhipha imiklomelo. Noma ngabe umklomelo omncane, uhlala ekhona njalo, futhi lokho kukhethwa amaJapane i-pachisuro shintsha iminye imishini eminingi yokudlala.
Imikhaya ye-Yakuza nokugembula ngokungemthetho eJapane
IJapan Yakuza, nazo zingamaqembu obugebengu, aqukethe amakhasino angekho emthethweni njengokugembula - enye yezinkomba eziyinhloko zemisebenzi yazo. Kuphela lapho kudlalwe ngokungathi sína, ngezinga elikhulu nemali. Ngaphezu kokugembula kwendabuko: amakhadi, i-roulette ingafaka i-pograt ku-Chinese Mahjong. Kuyaphawuleka ukuthi iJapan isebenza ngezinsizakusebenza eziningi ekhasino eliku-inthanethi, yize kunqatshelwe. Ngokungafani namazwe lapho, uma ufuna ngempela, abadlali bangazungezisa ngokukhululekile i-roulette ebonakalayo, ngokwesibonelo, kukhona i-www.igrovoyzal.com ngqo kwi-Intanethi, amaJapan asemngceleni wokugula ngokuzibeka wena engcupheni.
Ukumiswa kwamakhasino eJapane
Esikhathini samanje eJapane seqalile izingxoxo zokwakha i-casino ebhodini ebhodini kanye nekhasino ekhona ezindaweni zokuhlala. Iqembu laseJapan lokutakula uphakamisa iphrojekthi edidiyelwe yokubhuka yekhasino. Le phrojekthi izama ukuqalisa ngesikhathi semidlalo yama-Olimpiki eJapan. Abasunguli bephrojekthi bathi lokho ukugunyazwa kwekhasino ezindaweni eziqokiwe zaseJapan kungaba yisinyathelo esivuna umnotho wezwe. Izindawo zokugembula mhlawumbe zilawulwa nguhulumeni kanti ingxenye yenzuzo izongena esikhwameni sezwe.
AmaJapane athanda umhlaba obonakalayo. Bayakujabulela ukuchitha isikhathi esiningi bedlala imidlalo yekhompiyutha, ngentshisekelo bexhumana nabalingiswa ababonakalayo emidlalweni yokulingisa futhi baqala nomndeni ngqo kunethiwekhi. Kodwa-ke, ngasizathu simbe kusabalele kwezokuzijabulisa zomhlaba wonke njengamakhasino aku-inthanethi, akunakuba nezimpande eJapan.
AmaJapane aziwa ngokuthanda kwabo, amakhasino ambalwa abonakalayo ezweni ngokuqapha okuthile, futhi ukukhetha abanakho kuncane. Imboni yemidlalo ye-inthanethi yezwe, ngokumangazayo, ayikafiki ezingeni elifanele. Nansi incazelo.
Into ukuthi ukwenziwa kwasendaweni kokuqala kwenqwaba yamakilabhu okudlala online abonwe eYurophu naseNyakatho Melika. E-Asia, amakhasino aku-inthanethi asabalale muva nje, futhi ngasikhathi sinye, ngemuva kokubanjwa ngosizo olwedlulele lwezezimali futhi abonisa opharetha baseJapan basesezimpambanweni zemigwaqo, bengazi ukuthi "bangasondela kanjani" kubalaleli bendawo, okuhluke kakhulu kusuka entshonalanga.
Kuyaziwa ukuthi emkhakheni wekhasino yaku-inthanethi yaseJapan akulula ukuthola ulwazi. Labo opharetha abakwazile ukuphatha kahle imakethe yendawo bavaliwe impela. EJapan, akukho mkhuba wokubamba ingqungquthela ngalesi sihloko, ukukhishwa noma imihlahlandlela yokwenza ukubambisana okusebenzayo ekushintshaneni ngesipiliyoni.
U-Yuiga Sano, isazi sezimakethe zemidlalo yaseJapan , ungomunye wabaholi abambalwa abaphumelelayo embonini abazimisele ukwabelana ngolwazi lwabo kule ndawo.
NgokukaJuiga Sano ukuphumelela ekuthuthukiseni i-casino eJapane, kufanele ulandele le mithetho:
1. Esizeni sekhasino, ngaphezu kwemidlalo, kufanele kube khona ikhasi lemininingwane elinama-athikili athakazelisayo futhi anamandla. Umsebenzisi kufanele amukele iklabhu eku-inthanethi njengesiza lapho ungathatha khona isikhathi sakho ungadlali.
I-2. Isayithi i-casino e-intanethi kufanele ixhunywe kumanethiwekhi omphakathi (Tweeter, Facebook, njll)
I-3. I-casino ebonakalayo kufanele ibe nesithangami sayo lapho izivakashi zingakwazi ukuxhumana kuphela, kodwa nokuxhumana nokuphathwa kweqembu.
4. Musa ukweqisa ekukhangiseni. Isibonelo, ungabheka ekuthumeleni izimemo kusayithi.
I-5. Isayithi kufanele libe nekhasi ngencazelo eningiliziwe yokusebenza kweqembu, kanye nemigomo nemibandela yemidlalo.
6. Kuyadingeka ukubeka amasistimu wolwazi asetshenziswa eklabhini, nesiqondiso ngesinyathelo ngesinyathelo (okungcono ividiyo) sendlela yokuzisebenzisa. Ngempela, amaJapane amaningi awajwayelene nezinhlelo zokukhokha ezithandwayo, njenge- «PayPall» ne- «NETELLER».
7. Kuyadingeka ukuqeda ukusetshenziswa kwe-alfabhethi lesiLatini, futhi ngokuvamile zama ukubonakalisa emiqondweni yeklabhu eliku-inthanethi amasiko nemikhakha yaseJapane.
Ukulandela imithetho eyisikhombisa Yuiga Sano , ungazuza impumelelo emsebenzini onzima njengokudalwa kwekhasino eku-inthanethi yaseJapan. Imakethe yethu yasekhaya yeklabhu enjalo ebonakalayo, akunzima ukuyikhangisa. Kodwa-ke, opharetha baseRussia bamakhasino abonakalayo nabo banezimfihlo zabo zokuphumelela. Ekhasini http://777vulkan-kazino.com/vulkan-udachi angavakashela elinye lamaqembu okudlala online aseRussia ngokwesibonelo, futhi aqiniseke ukuthi zingaki izimanga abahleli abazilungiselele abasebenzisi bayo. © imago
EJapane, lapho ukugembula kungavunyelwe khona ngenkathi kuqhutshwa ingxabano ephikisayo mayelana nezindaba zokugembula okusemthethweni ezweni, futhi amakhasino angekho emthethweni ahlanganiswe nokuhlaselwa kwamaphoyisa endaweni yokugembula engekho emthethweni kuvulwa.
Muva nje ezinyangeni ezimbili ezedlule, ku-ajenda kuhulumeni waseJapan uthole umbuzo ngokungekho emthethweni amakhasino ase-intanethi eJapane . UMnyango Wezokulwa Nobugebengu Obahlelekile bezwe uthathe kanzima le nto ebukeka incane. Kwavela ukuthi, ngenxa yemisebenzi ebukeka incane kangako, ezokungcebeleka, umgcinimafa waseJapan uhola imali eningi impela.
Lapho kufakwe inani elithintekayo eliphendulela ngokungemthetho ibhizinisi lokugembula ku-intanethi yaseJapane , kwanqunywa ukuthi kuhlelwe ngokuphuthumayo iqembu elikhethekile elihlukile elizobhekana nokuvezwa kuphela kwamakhasino aku-inthanethi angekho emthethweni. Kubandakanya abantu abaqeqeshwe ngokukhethekile, ngesisekelo somnyango waseJapan wokulwa nobugebengu obuhleliwe.
Basebenza kuphela odabeni, ochwepheshe bavele babona ukuthi babhekene nenkinga enkulu kakhulu kunalokho obekungahle kubonakale ekuqaleni. Izimpande zebhizinisi eliku-inthanethi ngokugembula ngokungemthetho lajula kakhulu, futhi ababandakanyeka ekwephuleni kwakungabantu abaningi abanethonya, kufaka phakathi izikhulu nosopolitiki. Izinduna eziphezulu zeziphathimandla zaseJapane zazingezikuleli “phahla” lamakhasino aku-inthanethi angavumelekile. Lokhu kube nzima kakhulu emsebenzini weqembu elikhethekile eladunyazwa yilokhu kushintsha kwezindaba. Manje umsebenzi wabaphenyi kufanele uveze abenzi bobubi besikhundla esiphakeme kakhulu.
Yini ezithakazelisayo, usizo olusebenzayo ekuphenyweni opharetha bama-casino aseJapan esemthethweni e-intanethi , ngaphansi kwamagama ahlukene akhona ngendlela yezindawo ezithile zokudlala. Inhloko yeqembu elikhethekile ichaza lokhu kubambisana okusebenzayo ngokuthi imakethe emnyama yokugembula okubonakalayo ibamba imali kozakwabo abathembekile ababhaliswe ngokusemthethweni. Ubuye waveza nokuthi umnikelo wabasebenza ngokusemthethweni kumakhasino aku-inthanethi ngesikhathi semicimbi ubaluleke kakhulu futhi kufanele usize kakhulu uphenyo. Futhi ngokwabo amakilabhu angempela abancintisana ngokungemthetho abadalula izithembiso ngezinzuzo ezinkulu.
Okwamanje ubilise eJapane ubugebengu wangempela bokuthakazela emkhakheni wezokugembula enkundleni ezweni lethu banethuba lokudlala ngokukhululekile nge-virtual i-volcano casino kwizintambo ezithandwayo ze-intanethi.
0.1 Uhlu lwezindawo ze-Casino eziphezulu ze-10 zase-Japanese Online ze-Casino
2.1 Ukugembula ku-Japan eJapane
2.2 Amasayithi e-casino e-inthanethi avuma abadlali baseJapane
2.3 Ukugembula okusemthethweni ngesiJapane - nguKoei kyogi (ukushushuluza esidlangalaleni)
2.4 Lottery inhlanhla eJapane
2.6 Imikhaya ye-Yakuza nokugembula ngokungemthetho eJapane
2.7 Ukumiswa kwamakhasino eJapane
amakhasino aku-intanethi imali yangempela ayikho ibhonasi yediphozithi